डिभीको लागि छनौट हुनुभएन ? कन्फर्मेशन नम्बर नफ्याक्नुहोस् « Khasokhas Follow @khasokhasmag
डिभीको लागि छनौट हुनुभएन ? कन्फर्मेशन नम्बर नफ्याक्नुहोस्
प्रकाशित मिति : बैशाख २४, २०७६ मंगलबार
सन् २०२० को डिभी लोटरीका लागि छनौट भए नभएको चेक गर्दा छनौट नभएको विवरण प्राप्त गरेपनि आफ्नो कन्फर्मेशन नम्बर सन् २०२० को सेप्टेम्बर ३० सम्म आफैसँग राख्नुपर्छ । आफूलाई डिभी लोटरी परे नपरेको कुरा आगामी सेप्टेम्बर सम्म पनि चेक गर्न सकिने भएकाले कन्फर्मेशन नम्बर नफ्याक्न सुझाव दिइएको हो ।
ई–डिभीको वेबसाइटमा एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक मार्फत मात्र तपाईँलै आफू छनोट भए नभएको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसमा भिसा आवेदन तथा आप्रवासी भिसाको लागि अन्तर्वार्ता मिति र समयबारे थप जानकारी समेत दिइएको हुन्छ ।
डिभी लोटरी परे नपरेको थाहा पाउनका लागि यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो कन्फर्मेशन नम्बर, थर र जन्मेको बर्ष हाल्नुहोला ।
कुनै पनि अध्यावधिक जानकारीका लागि आफ्नो कन्फर्मेशन नम्बर २०२० सेप्टेम्बर ३० सम्म राखिरहनुहोस् ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसको कार्यादेश प्राप्त डाइभर्सिटी आप्रवासी भिसा कार्यक्रम अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्दछ । आप्रवासन तथा राष्ट्रियतासम्बन्धी ऐनको दफा २०३(सी) ले ऐतिहासिक रूपमा कम दरमा संयुक्त राज्य अमेरिका आप्रवासन गर्ने देशका व्यक्तिहरूलाई “डाइभर्सिटी आप्रवासी” का रूपमा एक वर्गको हैसियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चिठ्ठा पर्ने आवेदकहरू (“विजेताहरू”) ले डिभी कार्यक्रमका लागि योग्य हुनका निम्ति सरल तर कडा योग्यताका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ । भिसाहरू छ भौगोलिक क्षेत्रमा वितरण गरिन्छ र हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि एक देशले कुनै पनि एक वर्षमा उपलब्ध हुने डिभीको सात प्रतिशत सङ्ख्याभन्दा बढी भिसा प्राप्त गर्ने छैन ।
डिभी लोटरी परे नपरेको थाहा पाउनका लागि www.dvlottery.state.gov मा गई “एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक” (Entrant Status Check) मा क्लिक गरी आफ्नो युनिक कन्फर्मेशन नम्बर र व्यक्तिगत जानकारी हाल्नुहोस्। तपाईँंले आफू डिभीका लागि छनोट भए नभएको पत्ता लगाउन र आफ्नो आप्रवासी भिसा अन्तर्वार्ता अपोइन्टमेन्ट मिति चेक गर्नका लागि एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक प्रयोग गर्नु पर्दछ । अमेरिकी सरकारले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सूचित गर्दैन । एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक आफ्नो आवेदनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशनहरूको एक मात्र स्रोत हो ।
डिभी लोटरीका मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई सकियो, अदालतको निर्णय आगामी केही दिनमा आउने अपेक्षा
सोमबार अमेरिकाका डिभी लोटरीबारेका झण्डै ८ वटा मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गरिएको छ । दिउसो १
क्यालिफोर्नियाको अदालतले दियो डिभी विजेतालाई दोश्रो मौका, डिसीको मुद्दा मेहताको टेबुलमा
अमेरिकाको नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाको डिस्ट्रिक्ट कोर्टले परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डका सन्दर्भमा ज्याकोब भर्सेज बाइडेन मुद्दा
एसाइलम पेन्डिङ हुने र टीपीएस हुनेले यस्तो अवस्थामा डिभीबाट ग्रिनकार्ड पाउनसक्ने
आर्थिक बर्ष २०२२ का लागि डिभी लोटरीको नतिजा आइसकेको छ । तर अमेरिकामा भएका कस्ता